ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၉-၈-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၉-၈-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- စည်ပင်ကို မကျေနပ်လို့ လွှတ်တော်အမတ် ဆန္ဒပြ click
- လွှတ်တော်အမတ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ဆန္ဒပြ click
- စာနယ်ဇင်းကောင်စီ မီဒီယာဥပဒေမူကြမ်း လွှတ်တော်တင်မည် click
- နိုင်ငံ့အရေးကိစ္စတွေမှာ ရဟန်းပျိုများ ရှေ့တန်းမထွက်ဖို့ ဝန်ကြီး ပြော click
- ရခိုင် သယံဇာတ အကျိုးခံစားခွင့် လက်မှတ်ကောက်ခံ click
- သယံဇာတ ရောင်းရငွေ ခံစားခွင့်ရဖို့ ရခိုင်ပါတီ လက်မှတ်စုဆောင်း click
- မြောက်ဦးမြို့မှာ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် click
- ﻿ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၃ ဦး ကျောင်းတက်ခွင့် ပြန်လည်ရရှိ click
- ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ဆစ်ဒနီငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရရှိ click
- ကျောက်ဆည် ရှစ်လေးလုံး ငွေရတု မင်းကုန်း မဟာ စာသင်တိုက်မှာ ကျင်းပ click
- ကရင့်ရိုးရာ ချည်ဖြူမင်္ဂလာဖွဲ့ပွဲ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပ click
- မတူကွဲပြား ဘာသာလူမျိုးပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်စွာ နေထိုင်ရေး click
- အမေရိကားရောက် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သဘောထားအမြင် (အသံ) click
- တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးချက် (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ကူညီဖို့ မလေးပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို တင်ပြ click
- ရန်ကုန်မှာ ဆန်ဈေး သိသိသာသာ တက်လာ click
- မြန်မာ့ကြက်သွန်နီကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝယ်မည် click
- အကြွေးကတ်စနစ် အောင်မြင်ဖို့ ၅ နှစ်အထိ အချိန်ယူရမည် click
- လင်းလက်ကြယ်စင်နဲ့ ဆေးဖြတ်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ (အသံ) click
- အားကစားစိတ်ဓာတ်နဲ့ စည်းကမ်း click
- အကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှကို သည်းညည်းခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စီစီ သတိပေး click
- အီဂျစ်အရေး ကြားဖြတ်အစိုးရ ဆွေးနွေး click
- အီဂျစ်နဲ့ ဆက်ဆံရေး EU ပြန်လည် သုံးသပ်မည် click
- ကုလဓာတုလက်နက် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဆီးရီးယား ရောက် click
- ဆီးရီးယားဒုက္ခသည် အီရတ်ထဲ ၀င်ရောက်လာမှု တိုးလာနေ click
- JP Morgan တရုတ်ရုံးခွဲ လူကြီးသားသမီးခန့်ထားမှု အမေရိကန်အစိုးရ စစ်ဆေးပြီ click
- ဖိလစ်ပိုင် သင်္ဘောနစ်မြှုပ်မှုမှာ ပျောက်ဆုံးသူတွေ ဆက်လက်ရှာဖွေ click
နယ်စည်ပင်တွေလည်း သုသာန်မြေ။ သားသတ်ရုံမြေ။ ကျေးလက်ဈေးမြေ
တွေ အစိုးရပိုင်မြေ လိုလို အဖွဲ့ပိုင်မြေလိုလို နဲ့ ကုန်သည်တွေနဲ့ လက်ဝါးချင်း
ရိုက်ပြီး အများပိုင်အမည်ခံ ဘူဇွါ လက်သစ်တွေကိုပေါင်းရိုက်နေပါတယ်
အဆိုးဆုံးက တိုင်းညွှန်မှူးတွေ ပါ။ အကျင့်ပျက် လဒ်စားတာကတော့
ပထမ ရပါတယ်။ အခု ရာထူးတွေ တိုးဖှို့ အတွက်ဈေးခေါါနေပါတယ်။
စည်ပင်မှာ လဘ်စားမှုတွေများသမို. စစ်တပ်ကအရာရှိတွေ
၁၀ ယောက်ကျော် ၊ လွန်ခဲ.တဲ. တနှစ်က မြို.တော်စည်ပင် (ယာ/အုံ)
က နေရာကောင်းတွေ (ဌာနမှူး CE ၊ DYCE ၊ ACE ) စတဲ.နေရာ
တွေ ၀င်လာကြတယ် ၊
၀ါး --- လိုက်တာမှဗျာ ၊
FILE တွေကြာလိုက်တာ ၊
ဆောက်လုပ်ခွင်.တွေ ၊ BCC တွေ ၆လ ကျော်ကြာတယ်။
။ ပေးရကမ်းရတာပါဘဲ ။